आज पनि घट्यो सुनको भाऊ ! हेर्नुहोस् तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार….. – SUDUR MEDIA
March 31, 2021 AdminLeaveaComment on आज पनि घट्यो सुनको भाऊ ! हेर्नुहोस् तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार…..
काठमाण्डौ । नेपाली स्थानिय बजारमा आज बुधबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बुधबारको दिनमा छापावाला सुनको मूल्य एक तोलामा चार सय रुपैयाँले घटेर ८५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिंजो मंगलबार सुनको मूल्य तोलाको ८६ हजार थियो ।
त्यस्तै, आज नेपाली बजारमा तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा पनि चार सय रुपैयाँले घटेर ८५ हजार एक सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले घटेर ११ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः ललितपुरमा पनि देखियो बर्डफ्लु ! पछिल्लोपटक ललितपुर जिल्लाको नख्खुमा बर्डफ्लु रोगको संक्रमण देखिएको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १४ नख्खुमा स्थानीय किसानले पालेका कुखुरा, बट्टाई र हाँसमा बर्डफ्लु रोगको संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
गत माघ महीनामा काठमाण्डौको तारकेश्वर नगरपालिकामा पहिलोपटक घरपालुवा हाँस र टर्कीमा बर्डफ्लुको संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि सरकारले रोगको निगरानीका क्रममा देशका विभिन्न स्थानबाट नमूना संकलन गरी परीक्षण गरिरहेको छ ।
यसरी परीक्षण गर्ने क्रममा नै नख्खुमा संक्रमण पुिष्ट भएको विभागले जानकारी दिएको छ । ललितपुरसहित काठमाण्डौ, सुर्खेत र जाजरकोटमा यो रोग देखा परिसकेको छ । संक्रमण देखिएपछि त्यसलाई अन्यत्र फैृलन नदिई तत्काल नियन्त्रणमा लिन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरू परिचालन गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट